Nkọwa n'etiti sava maapụ (IMS) - Geofumadas
Disemba, 2007 ArcGIS-ESRI, AutoCAD-AutoDesk, Cadcorp, Geospatial - GIS, manifold GIS, Microstation-Bentley
Anyị na-ekwukarị ihe atụ na usoro nke ụgwọ, nke nyiwe ihe nkesa map dị iche iche, oge a ka anyị ga-ekwu maka ntụnyere na arụmọrụ. Maka nke a, anyị ga-eji ihe ndabere Pau Serra del Pozo, site na Teknụzụ Office of Cartography na Local GIS (Barcelona Provincial Council) na-amụ ihe na ọ bụ ezie na nyocha a dabere naanị na ngwaọrụ ndị ekesara n'ahịa, ọ nwere ike ịba uru mgbe ị na-ekpebi. maka imefu ego. Ekwesiri ighota na n'ime oru oru map, aghotara ya iguta ma dozie data GIS n'uzo ihe nchọgharị weebụ nwere ike gosiputa ha ihe ndi ozo. N'ime ọrụ ndị a "ntọala" anyị ghọtara: -Ọhụhụ, njirimara, ndụmọdụ na njikọ dị anya. -Ngwakọta nke oyi akwa, ụzọ ngụkọta oge, "redline" mbipụta, ọnụ ọgụgụ obibi.
Ndị na-ebi akwụkwọ GeoWeb (Bentley)
Web Geomedia (Ntụgharị)
Ịnweta usoro CAD Na-agụghị ama CAD data Achọrọ ArcMap Server Naanị gụọ Microstation Geographics na Ọdịdị Spatial Ọnọdụ Na-achọ Nzuzo Na-achọ, naanị gụọ DWF Na-agụ ihe niile CAD / GIS ma e wezụga Mapinfo Fọrọ nke nta ka ọ bụla usoro, mana n'ime DB.
Ndị ahịa achọrọ Agaghị achọ ihe ọzọ agbakwunyere Na-achọ ngwa mgbakwunye Java Ọ chọrọ nanị ngwa mgbakwunye (VPR) Achọrọ Applet Java Na-achọ Micrografx Applet IIS nke na-abịa na Windows
Na-agụ Space Spatial si ee, nakwa SQL Server 2008 nwaafo si si si Ee, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụmụ amaala.
Enwere ike ịchekwa ha na NT na Linux Ee, ọ na-enye ohere ma Ee, ọ na-enye ohere ma si si si Mba, naanị Windows site na ASP.
Nnwere onwe gbasara ngwaọrụ GIS Ee e Achọrọ ArcView dị ka ihe nkesa data Ee e Ee e Ee e Si
Ha nwere wizards si si ee, ọ bụ ezie na ọ chọrọ mmemme ee, ọ chọrọ mmemme Ee e Si
Nke kachasị mma, na-esi ike, karịsịa ebe ọ bụ na akwụkwọ ahụ nwere oge ụfọdụ, ọ bụ ezie na ndị a bụ ụfọdụ nkwubi okwu:
Ọ bụrụ na ị bara uru izere nsogbu nke inwe ịwụnye nkwụnye, nhọrọ kachasị mma bụ MapXtreme.
Ọ bụrụ na achọrọ ka ebipụta CAD ma ọ bụ SIG formats n'okpuru nchekwa mgbe niile, Web Geomedia o AkwukwoHa bụ nhọrọ kacha mma.
Ọ bụrụ na ịchọrọ igosi ihe nkiri na CAD, na-enweghị ọrụ dị ukwuu, Bentley Geoweb Onye nkwusa y MapGuideHa bụ ụzọ kachasị mma.
Ọ bụrụ na ị na-achọ ihe ngwọta dabara na Windows NT na UNIX, ngwọta kachasị mma bụ MapXtreme y Akwukwo
Ọ bụrụ na ịchọrọ mfe na akụ na ụba, GIS Manifold
N'ezie, nke a bụ na ngwanrọ ndị nwe ụlọ, na openource MapBender, MapServer, GeoServer ma ọ bụ MapGuide OpenSource ha na-edozi ma n'ọtụtụ ọnọdụ na ikike dị ukwuu karịa ngwọta akwụ ụgwọ.
Ahịa? tupu anyị ekwuo banyere haọ bụ ezie na Geomedia adịghị n'ebe ahụ, ma Cadcorp nọ n'ebe ahụ. Ọ bụ ihe ijuanya na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ihe a nile nwere ike ime site n ' ndị na-ewu ewu, n'agbanyeghị na ngalaba cadastre nke mba chọrọ mkpebi maka ngwá ọrụ ahịa, n'ọtụtụ oge maka nkwado ... na mgbe ụfọdụ maka egwuregwu gbara ọchịchịrị 🙂 Atụrụ m na nyocha ahụ bara uru nye mmadụ, ịgbanyekwu ihe.
Previous Post«Previous Sistemụ GIS zuru oke, gịnị kpatara na ha adịghị ewu ewu?
Next Post Integration nke map na web ngwaNext »